Maraoka: Tantaranà Mpanjaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 5:09 GMT
Tany am-piandohan'ny herinandro, rentsika niresaka momba ny finoana sy ny politika ny andianà frantsay voaantso ho any Maraoka. Tamin'ny zoma, nanohy tamin'izany lohahevitra izany ihany ilay blaogera Abdelilah Boukili (izay ny blaoginy dia mitondra ny anarana hoe Regular Comments on Issues Raised by BBC World Haveyoursay – Fanehoankevitra tsy tapaka momba ireo fanontaniana apetraky ny BBC world Omeo ny hevitrao) tao amin'ny blaoginy, mamaliany ireo fanehoankevitra tamin'ny lahatsotry ny BBC Have Your Say:
Tena miombon-kevitra aminao aho mikasika ny hoe te-ho anisan'izao tontolo izao ny silamo toa anao fa tsy hoe vondrompiarahamonina mitokana. Misy ireo silamo mbola mihevitra ny fomba fanao Silamo ho toy ny tsara indrindra, manondro ireo mahery fo, kalifa ary ny mpitarika ara-pivavahana silamo taloha ho toy ny ohatra tsara indrindra. Fa amin'ny maha-olombelona, tokony hirehareha amin'ny olona rehetra mandray anjara amin'ny maha-olona isika, na inona na inona finoany. Tia izay rehetra tia ny namany tahaka ny tenany Andriamanitra. Izay aloha, farafahakeliny, dia mba fomba fijery itovian'ny silamo sy ny kristiana.
Lohahevitra malaza tamin'ity herinandro ity i Meknès, ny tanànako malala (tanàna nandray ahy ho isan'ny azy). Momba azy, manoratra i Cat in Rabat :
Tiako i Meknès. Izay, nolazaiko mafy izy izay. Tsy zavatra ifampizaràko amin'ny mpiaramiasa amiko maro ny fitiavako an'i Meknès, fa tiako izy, izay fotsiny.
Amin'ny maha-efa niaina fotoana nisinisy tao Meknès ahy, iraisako izany fihetsehampon'ny blaogera izany – Na dia tsy tena manintona ny mpizahatany toa an'i Fez mpifanolobodirindrina aminy aza, na ihany koa tsy maoderina sy manankarena toa an'i Kazablanka na Rabat izy, dia ananan'i Meknès ny hery manintona sy tantara mahavariana izay resahan'ilay blaogera amintsika fohifohy:
Fa tsy mitovy amin'ireo tanàna maraokanina hafa, tena tsy azo iadian-kevitra fa mifandray amin'ilay endrika ara-tantara adalam-boninahitra, Moulay Ismail (1645-1727), i Meknès. Tsy afaka atao ny mandeha eny amin'ny lalan'ilay tanàna taloha ka tsy hahatsapa ny fisiany diabôlika ratsy sady mavestra. Moulay Ismail, ilay Lian-drà, fantatra tamin'ny famonoany izay olona rehetra mijery azy amin'ny fomba hafahafa, dia nandova ny fanjakana tanatin'ny hasosoran'ireo mpikambana efatra hafa tao amin'ny fianakaviany izay nihevitra ny tenan'izy ireo ho nanana rariny kokoa mba hitondra.
Tena mahagaga ny fisiana lahatsoratra iray momba an'i Meknès, fa lahatsoratra roa ao anatin'ny herinandro, tena tsy mampino. Kanefa manoratra mikasika ilay tanàna ihany koa ny The View From Fez, mizara amintsika rohy momba ny tantarana fitsidihana tao Meknès :
Mba hisian'ny fifandanjàna, raha toa ka heverinareo fa ny fitiavanay an'i Fez no nahatonga anay ho jamba amin'ny rivotra manintona ananan'i Meknès , nandeha naka olona hafa mihevitra ilay tanàna ho toerana mahafinaritra izahay. Tsy maintsy nitady tsara izahay, fa ny farany dia nahita an'i Gay Grant, mpanoratra tantara iray ao amin'ny The Capital Weekly, izay miarahaba antsika avy any Maine ao Etazonia.
Saingy noho ny tahotra hoe sao mety hihevitra ianareo fa i Meknès irery ihany no lohahevitra mahaliana afaka resahana am-blaogy, miresaka mikasika ny fianakaviana mpanjaka tao Maraoka ihany koa ireo blaogera sasany, izay tsy azo natao talohan'ny taona 1999, taona nidiran'ny mpanjaka ankehitriny, Ny Mpanjaka Mohammed VI. Nanoratra lahatsoratra iray tena manome vaovao be mikasika ny fianakaviana mpanjaka ny Braveheart-does-the-Maghreb, izay faranany toy izao :
Mihevitra aho fa niezaka ny hampandroso ny fireneny ny Mpanjaka. Mila mahatakatra ianareo fa toy ny miezaka manetsika ny takelaka pasifika izany, mila mandeha moramora fa raha tsy izany dia hahazo horohorontany ianareo. Izany no vokatra mivantana nateraky ny fanavaozana nataony. Tena aingam-panahy ho an'ny hetsika tarihan'ny vehivavy eto ny printsy vavy ary manao zavatra maro ho an'ireo zaza maraokana sy ny fanabeazana izy. Mazava ho azy fa misy ny fahadisoana ary olana maro no tsy maintsy alefa sy atolotra ny fianakavian'ny mpanjaka, fa tsy izany no lohahevitr'ity lahatsoratra ity.
Zarain’i Myrtus ihany koa ny rohy iray mikasika ilay mpanjaka teo aloha Mohammed V (ny dadaben'ny mpanjaka ankehitriny), izay vao haingana no notendran'ireo lehibe mpitarika vondrom-piarahamonina jiosy ao an-terana hitondra ny anaram-boninahitra ny Marina amin'ireo Firenena maro. Natolotr'i Yad Vashem ilay anaram-boninahitra ary omena an'ireo nanao vy vety ny ainy nanampy ny jiosy.
Sary avy amin'i Heri Es-Souani (Bassin d’Agdal) – Meknès, Maraoka avy amin'i Jillian York